Chad: Mukhtar Bil Mukhtar oo la dilay - BBC Somali - Warar
Chad: Mukhtar Bil Mukhtar oo la dilay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Maarso, 2013, 10:58 GMT 13:58 SGA
Mukhtar Bil Mukhtar ayaa ahaa nin aad loo raadinayay.
Dawladda Chad waxay sheegtay militrigeedu inuu dilay ninkii u sareeyey mintidiinta islaamiga ah ee waqooyiga Africa. Mukhtar Bil Mukhtar waxaa looga shaki qabay inuu amray weerarkii warshadda gaaska ee Algeria ee bishii Janaayo oo dad ka badan soddon qof oo la afduubay la dilay.
Nin u hadlay militriga Chad wuxuu sheegay, in muqtaar lagu dilay weerar lagu qaaday xero mintidiintu ku leeyihiin woqooyiga Mali. Warkan waxaa ka horeeyey mid soo baxay maalin ka hor oo sheegay in taliyihii Al-Qacida ee woqooyiga Africa Abu Zaid isna la dilay.
Hase ahaatee cid madax banaan oo xaqiijiineysaa dilalka labada nin ma jirto.